Jonathan enweta ọkwa ọhụrụ | odumblog
Jonathan enweta ọkwa ọhụrụ
posted on Jun. 09, 2019 at 11:52 am
Onyeisi ala chịbụrụ Naijiria bụ Goodluck Jonathan abụrụla onyeisi oche ndi ‘African Union’s International Summit Council for Peace (ISCP)’. N’ ọgbakọ otu mba ụwa na Johannesburg, South Africa ka o nwetara ọkwa a. ISCP bụ otu jikọtara ndi isi ala chịbụrụ na mba Afrika.
N’okwu nke Goodluck kwuru, nke isiokwu ya bụ ‘the need for a governance and peaceful electioneering process in Africa’, ọ gbara otu mba Afrika a ume ka ha wepụta ukpuru onye ọ bụla nabatara maka ihọpụta ndi isi komishion ntuliaka.
O mere ka ha mara na ukpuru a ga-enye aka ime ka enwee ntuliaka nke mpụ na-adighi na mba Afrika niile; ka ọ ga-abụ, mgbe a ga-enwe ntuliaka na mba ọ bụla, ndi na-azọ ọnọdụ ọchịchị ọ bụla ga-enwe obi siri ike na ntukwasi obi na ndi na-ahụ maka ọrụ ntuliaka.
Esemokwu maka ala eriela isi mmadu n’Anambra